Diji – Page 2 – iAfrika
Sicela usaphothe abaxhasi bethu: IDiji inikeza uqeqesho lwamahhala lwamakhono ekhompyutha, kwi-inthanethi nangesiZulu. Chofa LAPHA ukuze ufunde amakhono amasha mahhala - efonini yakho, ngesikhathi sakho, ngolimi lwakho.
Athini amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa? Ungathola izincazelo ngaphansi. Amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa Uma uphupha izithelo eziningi ezahlukene. Kuyenzeka uphuphela umuntu wakini noma umngane wakho okhulelwe. Uma uphupha udla izithelo kusuke kunguwena ozokhulelwa noma kanti vele usukhulelwe. Uma uphupha ubhukuda emanzini angcolile noma udaka olunamanzi ubisha kulona kusuke kunguwena okhulelwe. Uma uphupha ukuthi ukhulelwe … Read more
Izithakazelo zakwa Shabalala
Mshengu, Donga lukaMavuso, Sidwaba silu Thuli, Ngxabalala, Chagwe, Noyaba Mabhedla Thapo Thingisi Shevi Bhuqa Sayiwana Bhokwe Samanisi Mehlwempi Nkosikayikho Phikindaba Magudulela Sagqubha Ndleko Moniwa!
Tags Clan names, Shabalala, Tshabalala
Izithakazelo zakwa Ngwenya
Ngwenya Mntimande, Bambolunye, zingaba mbili, zifuze konina, ekhabonina, mabuya, bengasabuyi baye babuya emangwaneni , nungunde, wakhothe, bayosala beziloyanisa
Tags Clan names, Ngwenya
Izithakazelo zakwa Nene
Nene! Sithenjwa! Vezi! Mthiyane! Mngadi kaNgema Madlokovu Owadlokovula imifula, bethi imifula yenile! Igcwele izingwenya nezingonyama, Madlokovu eseMphungandlu eMthonjaneni! Madlokovu sabela uyabizwa eNkonjeni.
Tags Clan names, Nene
Uma uphupha lina incazelo iya ngokuthi inamandla kangakanani futhi sekuyisikhathi esingakanani lina. Ukuphupha imvula ejwayelekile: Kusho ukuthi uzothola okuthile ngokushesha – kungaba isipho. Ukuphupha imvula enesivunguvungu: Uma kuyisivunguvungu kunezikhathi ezinzima eziza kuwe. Kuyoba nenkohliso kanye nokungajabuli empilweni yakho kodwa uma wenza ngokuhlakanipha uyophumelela ekugcineni. Ukuphupha imvula isimile, enelanga: Uma uphupha ukuthi imvula isimile futhi nelanga … Read more
Ukuphuha isihlahla noma izihhlahla (ihlathi) kungasho izinto eziningi. Uma isihlahla sisikhulu namagatsha amaningi- kusho ukuthi uyoba nempilo enokujabula nekhaya elikhulu. Uma isihlahla siluhlaza noma ubona izihlahla eziningi- kusho ukuthi uyojabula futhi ubenenhlanhla. Uma ugibela isihlahla- kusho ukuthi uyothola umsebenzi omusha futhi ongcono. Uma uwa esihlahleni-kodwa uzobhekana nenkinga emsebenzini. Uma isihlahla sigawuliwe- uzobhekana nokulahlekelwa okukhulu maduze. Uma … Read more
Izithakazelo zakwa Msibi
Wena weNdlondlo Mabuya bengabuyi Ngonyama kaSiwela Nina bakwaMayikamabili Elinyelakanyoko Elinyelikayihlo
Tags Clan names, Msibi
Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka
Uma uphupha ukuthi ungcolile, kuwuphawu lwesikhathi esinzima ekusaseni lakho. Kusho kakhulu ukuthi kungenzeka ube namahloni ngenxa yento oyenzayo. Uma ungcolile ngoba omunye umuntu ekujikijela ngezinto, kusho ukuthi uzokwenza izitha, ngakho qaphela izinto ozitshela abantu. Kodwa uma ungcole ngoba uwile phansi, kusho ukuthi uzokhuthuzwa noma ulahlekelwe yimali maduzane. Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile. Amaphupho ngodoti.
Tags Ukuhlanzeka, Ukungcola
Uma uphupha ukuthi kunento oyigibelayo, kusho ukuthi uzophumelela kangakanani empilweni. Uma ufika phezulu, uzofinyelela izinhloso zakho empilweni, othandweni nasemsebenzini. Uma ungafiki, noma uwa phansi, kusho ukuthi uzodumala. Uma usugibelile wafika phezulu emaphusheni akho futhi usuyehla, kusho ukuthi kuzoba noshintsho oluhle empilweni yakho maduzane. Uma uphupha ukuthi ugibele ihhashi kusho ukuthi uzobhekana nosizi nokudumala empilweni yakho … Read more